Fanavaozana lisi-pifidianana :: Kivy amin’ny ireo antoko politika miraviravy tanana ny Ceni • AoRaha
Fanavaozana lisi-pifidianana Kivy amin’ny ireo antoko politika miraviravy tanana ny Ceni
Hikatona vonjimaika, raha afaka roa andro, ny fanavaozana ny lisi-pifidianana eny anivon’ireo fokontany. Ambany ny taham-pahavitrihan’ireo olom-pirenena misoratra anarana. Miraviravy tanana fotsiny ireo antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena sasany amin’ny fanentanana an’ireo mpifidy, araka ny nolazain’ny filohan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), Rakotomanana Heriniaina, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
“Antom-pisian’ireo antoko politika ny fandraisana fahefana amin’ny raharaham-pifidianana sy ny fanentanana ny mpifidy handray anjara amin’ny fanavaozana ny lisitra isan-taona. Tahaka izany koa ireo fiarahamonim-pirenena. Ny mampalahelo anefa dia miraviravy tanana fotsiny ry zareo”, hoy izy.
Ankoatra izay, nilaza koa ny filohan’ny Ceni fa: “tarehimarika farany ambany indrindra hatramin’ny nisian’ny fanavaozana lisi-pifidianana no tsikaritra, amin’izao fotoana izao. Dimy alina sy iray hetsy monja ireo mpifidy vaovao nisoratra anarana. Lasa 1,5 % ny taham-pahavitrihana raha toa ka teo anelanelan’ny 2 ka hatramin’ny 5 % izany, hatramin’izay”.
Sosialim-bahoaka anaty fihibohana Hizaràna vatsy misimisy ireo tokantrano roa hetsy
Fodiamandry Nahatsiaro an’i Danny Rabemananjara ny Fimpima
Fotodrafitrasa Ho vita afaka herintaona ny “Lalan’ny atody”
Fitsaboana ny covid-19 Mitady mpitsabo sy mpitsabo mpanampy 324 ny fanjakana
Fisafoana tany Ampanihy :: Kitozan-tsokatra 250 kilao saron’ny zandary
Asan-dahalo tany Beraketa :: Avotra ny vehivavy roa natao takalon’aina